Kuomesa Kwemifananidzo Iko Kunofanirwa Kutsvaga, Nhare, Uye Shanduko Kugadziridza | Martech Zone
Kana vagadziri vemifananidzo nevatori vemifananidzo vaburitsa yavo yekupedzisira mifananidzo, ivo kazhinji havana kugadzirirwa kudzikisa saizi refaira. Kumanikidza kwemifananidzo kunogona kudzora zvakanyanya saizi refaira remufananidzo - kunyangwe 90% - pasina kudzikisira hunhu kune ziso rakashama. Kuderedza saizi refaira remufananidzo kunogona kuita zvakwakanakira.
Nokukurumidza Mutoro Nguva - kurodha peji nekukasira kwave kuzivikanwa kupa ruzivo rwepamusoro kune vashandisi vako uko vasingazonetseke uye voita kwenguva yakareba newebsite yako.
Yakagadziridzwa Organic Kutsvaga Masosi - Google inoda saiti dzinokurumidza, saka iyo yakawanda nguva iwe yaunogona kusvina kubva kune yako saiti kutakura nguva, zvirinani!
Kuwedzera Kwekutendeuka Mitengo - anokurumidza nzvimbo shandura zvirinani!
Zvirinani Inbox Kuiswa - kana iwe uchipa mifananidzo hombe kubva kune yako saiti muemail yako, inogona kukusundira iwe kune junk folda pane iyo inbox.
Zvisinei nemutengi, ini ndinogara ndichitsimbirira uye nekugadzirisa mifananidzo yavo uye ndoona kuvandudzwa kwavo peji kumhanya, chinzvimbo, nguva pane saiti, uye nemitengo yekushandurwa. Iyo zvirokwazvo iri imwe yenzira dziri nyore kwazvo dzekutyaira kugadzirisa uye ine kudzoka kukuru pane kudyara.
Maitiro Ekugadzirisa Maitiro Ekushandisa
Kune nzira dzinoverengeka dzekusimudzira zvizere mifananidzo mune zvemukati.
sarudza mifananidzo mikuru - vanhu vakawandisa vanokoshesa kukanganisa kwemifananidzo mikuru kuti vapfuure meseji ... ingave infographic (senge ino chinyorwa), dhayagiramu, inotaura nyaya, nezvimwe.
Compress yako mifananidzo - ivo vanoregedza vanokurumidza ivo vachichengetedza mhando yavo (tinokurudzira Kraken uye ine rakakura WordPress plugin)
Gonesa yako mufananidzo faira mazita - shandisa anotsanangura mazwi akakosha anoenderana nemufananidzo uye shandisa madheshi (kwete anosimbisa) pakati pemazwi.
Gonesa yako mufananidzo titles - mazita akafukidzwa mumabhurawuza azvino uye nzira huru yekuisa kufona-ku-chiito.
Gonesa yako yemhando imwe mavara (shandura) - alt zvinyorwa zvakagadziriswa kuti zviwanikwe, asi imwe nzira huru yekuisa akakosha mazwi emufananidzo.
batanidzo mifananidzo yako - Ndiri kushamiswa nenhamba yevanhu vanoshanda nesimba kuisa mifananidzo asi vosiya chinongedzo chingashandiswa kudhiraivha vanhu vekuwedzera kune rinomhara peji kana imwe yekufona-ku-kuita.
Wedzera mashoko kune ako mifananidzo - vanhu kazhinji vanokweverwa kumufananidzo, vachipa mukana ku wedzera mavara akakodzera kana kufona-ku-chiito kutyaira zvirinani kubatana.
Sanganisira mifananidzo mune yako Sitemaps - tinokurudzira Chidimbu Math SEO kana iwe uri paWordPress.
Shandisa wirirana mifananidzo - vector-yakavakirwa mifananidzo uye kushandisa srcset kuratidza akawanda, akagadziridzwa saizi yemifananidzo, inotakura mifananidzo nekukurumidza zvichibva pane yega yega kifaa zvichienderana nesarudzo resolution.
Takura mifananidzo yako kubva pa content delivery network (CDN) - aya masosi ari enzvimbo uye anokasira kuendesa kwemifananidzo yako kune vashanyi vako 'mabhurawuza.
Webhusaiti Yemufananidzo Optimization Nongedzo
Iyi yakazara infographic kubva WebhusaitiBuilderExpert, Webhusaiti Yemufananidzo Optimization Nongedzo, inofamba nemabhenefiti ese ekumanikidza kwemufananidzo uye kugadzirisa - nei zvichikosha, chimiro chemafomati, uye nhanho-nhanho pane optimization yemufananidzo.
Kraken Image Kudzvanywa Platform
Kana iwe uchida bundu rinokurumidza mune yako saiti kutakura nguva, usatarise kupfuura Kraken, Imwe yemasevhisi akanakisa pamambure! Isu takamboedza emahara masevhisi munguva yakapfuura - asi edu makuru magiraidhi aiwanzo kuve akakurisa saizi yefaira yebasa ravo - ndeipi mhando yekukunda chinangwa!
Kraken ine yakazara yewebhu interface, yakasimba API, uye - nekutenda - WordPress Plugin! Iyo plugin inokutendera iwe kuti uwedzere otomatiki kana iwe uchiisa pamwe nekuwanda kugadzirisa mimwe mifananidzo iwe yawakange wakamboisa kare. Mhedzisiro yacho inoshamisa.
Uye, kana iwe uri mumiriri, sevhisi yaKraken inopa akawanda API makiyi kuti iwe ugone kubatanidza huwandu hwevatengi kusevhisi
Saina Up YeKraken
Ingori katsamba, tiri kushandisa yedu Kraken yakabatana chinongedzo mune ino posvo! Ndinovimba iwe unobatana uye ukakohwa mabhenefiti.
Tags: alt tagsshanduraCdngoogle saiti kumhanyacompression yemufananidzomufananidzo zita refairaimage optimizationmufananidzo wekugadzirisa gwaramufananidzo optimization infographicmufananidzo resizemufananidzo sitemapmazita emifananidzofungidzirakrakengonesa mifananidzopage speedinoteerera mifananidzoseoseo mufananidzo optimizationshortpixelkumhanya saitisrcsetdiki pngwebhusaiti optimization gwarawebsuivamildrexpertwordpress mufananidzo kudzvinyirirasaizi yemufananidzo saiziWordpress kraken pluginwp svuta